Lammaane ay u dhasheen “ilmo aan kuwooda ahayn” oo si khaldan loogu beeray ilmo galeenka | Baydhabo Online
Lammaane ay u dhasheen “ilmo aan kuwooda ahayn” oo si khaldan loogu beeray ilmo galeenka
Lamaane u dhashay Aasiya oo isku dayay inay carruur ku helaan habka caafimaad ee ilmaha ay dumarka iyo ragga aan ilmaha dhali karin ay ku dhalaan ee IVF, ayaa ku andacoonaya in Cisbitaalka California uu si khaldan ugu beeray caruur.
Dacwad ay lamaanuhu geeyeen Maxkamad ku taala magaalada New York ee dalka Mareykanka ayaa lagu sheegay in lamaanahaasi ay ka argagaxeen markii ay dhaleen labo wiil oo aysan isku isir ahayn oo aan ka soo jeedin Aasiya, sida ay ku warinayaan warbaahiinta Mareykanka.
Waxay dacwadooda ku shegeen in tijaabada hiddosidaha loo yaqaano DNA-da laga qaaday ay xaqiijisay in carruurtaasi aysan wax xiriir ah la lahayn aabaha, sidaasi darteedna ay iska wareejinayaan mas’uuliyadooda.
IVF waa waa habka ugxanta dumarka loogu beerayo biyaha ragga, kadibna lagu tallaalo ilmo galeenka dumarka.
Rugta caafimaadka ee Carlifornia ee fulisay adeegan caafimaad ayaanan weli ka hadlin waxa dhacay.
“Muddo afar sano ah,wax uur ah ma yeelan, kahor inta aanan bixin in ka badan $100,000 (£80,000) si ilmo galeenka la iigu beero ilmo, lacagtaas oo ay isugu jiraan daaweynta, kharashkii shaybaarka, safarka iyo waxyaabo kale” ayaa lagu sheegay dacwadda.
Waxaa jiray calaamado hore oo muujinaya in wax qaldan uu jiro kadib markii raajada caloosha laga saaray haweenayda ay muujisay in ay wiil waddo, inkasta oo ay dhaqaatiirta sheegeen in aysan isticmaalin ugxaanta labka lagu dhalo.
Waxaa la soo wariyay in dhakhaatiirtu ay lammaanaha ku war galiyeen in baaritaanku uusan ahayn mid sax ah, ka hor intaysan wiilasha dhalan bishii April.